PostPost Plugin yeWordPress Yakakwidziridzwa | Martech Zone
PostPost Plugin yeWordPress Yakagadziridzwa
Svondo, June 14, 2009 Svondo, November 16, 2014 Douglas Karr
Iyi posvo yamiswa. Pane zvakawanda munzvimbo yekuchengetera - imwe yandakawana iri yakanaka Nice iri Mushure mekugutsikana.
Imwe yemapulagi anozivikanwa ini ndakagadzira yeWordPress ndiPostPost. Vanhu vazhinji vanoshuvira kugadzirisa mapeji avo, zvinyorwa uye mafidha asi kuzviita kubva mukati merongedzero yetimu zvinogona kuomarara. Iyi plugin inokutendera iwe kuti unyore zvemukati usati kana mushure mekutumira pane imwechete peji, ese mapeji, kana chete mune yako feed.
Munguva pfupi yapfuura, ndanga ndichiita kukwikwidza kupihwa kuburikidza neangu feed uye iyo plugin yauya inobatsira! Ini ndakaisa meseji pamberi peyangu posvo yekudyara kuti vanhu vanditumire email neimwe yakatarwa chidzidzo. E-mail yekutanga yandinogashira inohwina $ 125 kunyoreswa kune .net magazini, inonakidza magazini inovhara toni yemisoro neinternet tekinoroji (uye kumwe kushambadzira). Mazuva mashoma gare gare, iniwo ndakazivisa iye anokunda kuburikidza neiyo plugin!
PostPost inokutendera iwe kuti uwane capital pane iyo i — inopiwa, i — peji uye ndiye_single mashandiro eWordPress pasina kuti unzwisise maitiro ekugadzirisa yako theme kana kunyora kodhi. Dhawunirodha PostPost kubva paPageji peji.
Ini handiwanzo gadziridza plugin kunze kwekunge ndawana toni yemhinduro yechinhu kana ini ndiri kuyedza kudzidza chimwe chinhu chitsva. Mune ino kesi, ini ndaida kuisa jQuery iyo inosanganisirwa neWordPress. Izvo zvaive zvisiri nyore sezvandaifunga, zvakadaro. Kutanga, ini ndaifanira kuwedzera fomati kune iyo plugin ine chaiyo WordPress PHP basa:
Mukati meiyo jQuery kodhi, pane akati wandei madiki ekugadzirisa zvakare. Kazhinji, kufona kwekutanga jquery kunowanzo nyorwa seizvi:
$ (gwaro) yatove (basa ()
Mukati meWordPress, zvinoita kunge seizvi:
jQuery (gwaro) yatove (basa ($)
Ichi chaive chirongwa chinonakidza uye chave chauya chinobatsira! Ehe, ini zvakare ndakawedzera imwe kodhi yekuburitsa yangu blog's feed mukati meiyo manejimendi peji zvakare - iri yemahara plugin, saka wadii kukurudzira blog yangu mukutsinhana.
Tags: mushure mekugutsikanamushure mekugutsikana pluginmushure mekutumirapost postpostpostpostpost pluginWordpress plugin
Safari 4 Yakaburitswa - Firebuggishly Yakakura!
Jun 14, 2009 pa 6: 07 PM
Chimwezve chikonzero chekuda WordPress. Ndatenda!
Nov 16, 2014 pa8: 56AM
ndinga dhawunirodha sei iyi plugin? "Https://martech.zone/projects/postpost/" iri peji risingashande
Mbudzi 16, 2014 na12: 41 PM
Isu takasiya iyi plugin. Kune akawanda akakura akatsigirwa mudura - tarisa Mushure mekugutsikana.